Guddida Qurbo-jooga Beelaha Arab ee Yurub iyo North America oo Madaxweynaha Somaliland Ugu Baaqay in Lasoo Dadajiyo Gogoshii uu Fidiyay. | Baligubadlemedia.com
Guddida Qurbo-jooga Beelaha Arab ee Yurub iyo North America oo Madaxweynaha Somaliland Ugu Baaqay in Lasoo Dadajiyo Gogoshii uu Fidiyay.
August 25, 2017 - Written by editor
Guddida Qurbo-jooga Beelaha Arab ee Yurub iyo America ayaa Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo ugu baaqay,in uu si dhaqso ah loo bilaabo wadda hadalada Somaliland iyo Khaatumo kuwaas oo uu hadhsanyahay uun wajigii ugu danbeeyay ee wada hadalku.
Baaqan kasoo yeedhay Qurbo-jooga Beelaha Arab ayaa daba socday mid dhawaan kasoo baxay golaha dhaqanka Beelaha Arab,kaasi oo uu ku sexeexnaa Af-hayeenka Dhaqanka Beelaha Arab Suldaan Xuein Xaaji Cabdi,isaga oo ku hadlayay Magaca golaha Dhaqanka Beelaha Arab,waxa uu hoosta xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la helo Somaliland oo mida loona dhanyahay.
Haddaba Baaqan ay soo saareen Guddida Qurbo-Jooga Beelaha
Arab ee Qaaradda Yurub iyo North America oo Nuqul ka mid ah ay soo gaadhsiiyeen Shabakadda Baligubadlemedia waxa uu u qornaa sidan.
Iyadda oo Midnimada,Wadjirka,wax wada-lahaanshaha ay tahay meelaha astaanta u ah ee muujinaya in uu Qaran noqdo mid horumara qayrkiina la tartama Cadaawahana ka gulaysta, oo aanay cidda hana qaadiskiisa aan raaliga ka ahayni ka waydo meelo ay kasoo gasho.
Sidaa awadeed bulshada ku dhaqan Gobolada Bariga Somaliland,waxa ay tabasho marba heer ah ka muujinayeen Xukuumadiihii kala duwanaa ee ka jiray Somaliland,iyada oo mararka qaar wakhtiyo kala duwan ay dhaceen dagaalo khasaare naf iyo mid maaliyadeedba gaystay,kuwaas oo sababay in gobaladaas dib u dhac ku yimaado.
Annaga oo ka dulayna,isla markaana Taageerayna Gogoshii nabadda ee Madaxweymaha Jamhuuriyadda Somaliland fidiyay taas oo Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ugu talagalay in lagu soo af-jaro Tabashada bulshada ku dhaqan Gobolada Bariga Somaliland gaar ahaan Sool,Sanaag iyo Cayn,waxa aanu ku baaqaynaa qoddobada hoos ku qoran.
· Waxa aanu si mugleh u taageeraynaa, go’aankii dhawaan kasoo baxay golaha dhaqanka Beelaha Arab,kaasi oo si waafiya uga hadlay baahida loo qabo in dhaqso looga hawl galo gogoshii uu Madaxweynaha Somaliland fidiyay ee lagu soo af-jarayay tabashada bulshada Goboladda Bariga.
· Waxa aanu taageeraynaa soona dhawaynaynaa go’aamaddii kasoo baxay,kulamadii kala duwanaa ee ay yeesheen Khaatumo iyo Somaliland. Anaga oo u aragna in dhamaan guulo ka soo hoyden kulamadaasi.
· Waxa aanu ugu baaqaynaa in labada dhinac ay ka fogaadaan wixii xagal daac ku keenaya habsami u socodka wada hadalada,isla markaana ka shaqeeyaan qodobadda taabanayay nabadda ,isusocodka iyo is dhexgalka bulshada.
· Waxa aanu ugu baaqaybnaa Xisbiyadda Somaliland iyo Hogaamiyeyaasha Xisbiyada in ay meel looga soo wada jeedo sidii looga wada shaqayn lahaa midnimada iyo walaalaynta Bulshada Somaliland ,lagana fogaado kala qaybinta bulshada Somaliland.
· Waxaanu ugu baaqaynaa dhamaan Madaxdhaqameedka Somaliland in ay Xukuumadda ku garab istaagaan,sidii looga gungaadhi lahaa in lahelo Somaliland lawada leeyahay oo ay u dhantay bulshada Somaliland.
· Ugu danbayntii waxaanu Madaxweynaha Somaliland ugu baaqaynaa in uu sida ugu dhaqsaha badan ugu hawlgalo una mudeeyo qabsoomidda gogoshii uu fidiyay,taasi oo runtii magac,maamus iyo Taariikhba u noqonaysa Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo.
Guddida Qurba-Jooga Beelaha Arab ee Qaaradda Yurub iyo North America.